पूर्वराजा नाचेको मन नपराउने प्रचण्ड किन धेरै तर्सिन्छन ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← आगलागीमा ८७ घर जले : आगो निभाउन गाउँमा न युवा छन्, न पानी
कांग्रेसको तयारीले झस्कियो सरकार, संसदमा घम्साघम्सीको संकेत →
पूर्वराजा नाचेको मन नपराउने प्रचण्ड किन धेरै तर्सिन्छन ?
Posted on 24/12/2018 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, ९ पुस । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुई हप्ताको लागि भने पोखरा पुगेका छन । पोखरामा उनको भव्य स्वागत भएको छ । स्वागतदेखेपछि पूर्वराजा शाहमा उत्साह पलाएको हुन सक्छ । पोखराको निर्मल पोखरीस्थित माउन्टेन ग्लोरी फरेस्ट रिसोर्टमा बस्दै आएका पूर्वराजा शाहले आफू निकटका नेता, व्यापारी, समाजसेवी, हिन्दू धर्मका अगुवाहरू आदिसँग भेट गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वराजा शाहले केही दिन अगाडि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरूका बीच हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका विषयमा कुराकानी भएको नेताहरू बताउँछन ।
पूर्वराजा शाहका गतिविधि पछिल्लो समय बाक्लिन थालेपछि सबैभन्दा धेरै छटपटाहट सत्तारुढ नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भएको छ । प्रचण्डले पूर्वराजा शाहको सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचना गरिसकेका छन ।
पूर्वराजा शाहका गतिविधिबाट प्रचण्ड किन यति धेरै तर्सिन्छन । बुझन सकिएको छैन । नेकपाका नेताहरू पूर्वराजाका गतिविधिबाट खासै सशंकित छैनन । तर, प्रचण्ड पूर्वराजासँग यति धेरै डराएकोमा धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन ।
पूर्वराजा शाह सर्वसाधारण नागरिक भैसकेका छन । उनीसँग राजनीतिक दलका नेताहरू तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको नेकपाकै दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन । पूर्वराजा होटेलमा गएर नाचुन वा पोखरामा गएर शुभेच्छुकसँग भेट गरुन धेरै महत्व दिनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन ।
नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई अभिव्यक्ति र हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको क्रियाकलापबाट डराउनु वा तर्सिनु भनेका आफैसँग डराउनु हो भननेहरू पनि छन ।
तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष रहेका बेला ‘प्रचण्ड’ भद्रकालीमा नायिका रेखा थापासँग छमछमी नाचेका थिए । तर, पूर्वराजा शाह रेष्टुरेन्टमा परिवारसँग नाच्ने र रमाइलो गर्दा प्रचण्डले किन आलोचना गर्छन भनेर धेरैले आश्चर्य मान्न थालेका छन । पूर्वराजा शाहका साना कुराहरूको प्रचण्डले आलोचना गर्दा धेरैले रुचाएका छैनन ।(दैनिक )